Eyi Train Bridges Na Europe | Save A Train
Home > Train Travel Switzerland > Eyi Train Bridges Na Europe
Ejegharị ụgbọ okporo ígwè ama maka inye njem ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mara mma Train Bridges, cinematic odida obodo echiche. Inweta a ohere ịga Train Bridges, ị pụrụ ịhụ Rolling ugwu nta, obodo, na oké osimiri nile si gị ala oche mgbe agafe Europe site okporo ígwè. Mgbe ụfọdụ, ndị ụgbọ okporo ígwè na ya bụ ihe kasị eleghara anya ịma mma. anọ ndị a European ụgbọ okporo ígwè Train Bridges ga-ume gị pụọ.
Anyị mbụ Train Bridges ghota bụ Landwasser Viaduct, Switzerland
Switzerland tren njem
Nke a ụgbọ okporo ígwè akwa bụ ihe ịrịba ụkpụrụ ụlọ ebube. Ị pụrụ ịhụ na isii na nkume nzu arches na-ezu ike na ise elu ogidi. Àkwà mmiri ahụ na-eduga kpọmkwem na Landwasser dị mita 216 n’ogologo ọwara.
The àkwà mmiri jikọrọ abụọ abụọ na Landwasser osimiri n'etiti obodo nile nke Schmitten na Filisur, na Graubünden ebe nke Switzerland. O nwekwara e kwuru a UNESCO World Heritage Site. Ọ na-arụ ọrụ taa na kemgbe ebe ọ bụ na ẹkụre na 1902.
N'Ihu Railway Bridge, The top Train Bridges na Scotland
Scotland Okporo ígwè akwa
Ọmarịcha akara ama ama ndị Scotland a gafere Osimiri N'Ihu na Queensferry, dị nnọọ n'ebe ọdịda anyanwụ nke Edinburgh.
Ọ na-mere nke atọ ígwè abụọ-cantilevers sonyeere ogologo ogidi ntụhie. Nnukwu rivets jikọọ ha isi Ọdịdị nke ahụ Train Bridges. Granite piers akwado cantilevers. Ọ bụ n'ezie a feat nke Victorian engineering.
The ụgbọ okporo ígwè akwa e dechara na 1890 na refurbished na repainted na 2011-2012. The n'Ihu Railway akwa kemgbe a UNESCO World Heritage saịtị kemgbe 2005. E nwere n'etiti 190 na 200 ụgbọ oloko na-agba ọsọ gafee ya kwa ụbọchị.
Hohenzollern akwa, Germany
Germany azụ akwa
The Rhine osimiri aghasasị German obodo nke Cologne. Seven àkwà mmiri agafe ebube osimiri na Cologne. The Hohenzollern Train Bridges bụghị naanị ndị kasị mara mma, kamakwa ndị kasị kpamkpam eji ụgbọ okporo ígwè akwa na Germany. Ọ na-ahụ n'elu 1200 azụ ụbọchị nke ọ bụla gafee isii tracks.
The Hohenzollernbrücke bụ njiko akwa, na atọ ígwè arches tinyere ya ogologo. E wuchara ya n'ime 1911 na refurbished na 1940s, 1950s, na 1980s.
Ebe ọ bụ na ọ bụ naanị 409 mita ogologo, e nwekwara a ngalaba nke mmiri maka pedestrians na agba ígwè. E nwere otu ọ bụla n'akụkụ nke n'ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Ndị mmadụ amalitela ịtụkwasị “ịhụnanya padlocks” na ngere n'etiti okporo ígwè na-agafe agafe ebe kemgbe 2008.
Viaduct nke Chamborigaud, France
France ochie ụgbọ oloko akwa
Ị ga-ahụ nke a ikpọ semicircular njiko Train Bridges na French obodo nke Chamborigaud, dechara na 1867. Ọ bụ ka na-eji taa.
The nkume viaduct obe na Luech osimiri. Ọ bụ a curved mmiri na a ngụkọta ogologo 387 mita. Otú ọ dị, ọ bụ nnọọ warara na naanị 14m dịgasị. Viaduct nke Chamborigaud si usoro chere ihu upstream, n'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ àkwà mmiri nke ụdị.
Italy mere ụgbọ okporo ígwè akwa
The ụgbọ okporo ígwè viaduct bụ nọmba 31 na ndepụta nke ihe ndị kasị elu n'ụwa ụgbọ okporo ígwè àkwà mmiri. ọ na-anọchi 145 mita elu na dị nnọọ 78 mita ogologo. Ọ na-na nsogbu na njedebe nke Santa Giustina ọdọ mu na Dermulo, Northern Italy.
The Santa Giustina ọdọ bụ manmade na mmiri na-aga site na ọ na-arụpụta ọkụ eletrik. Ọ na-na-ọma na-mara maka mmiri egwuregwu na ịkwọ ụgbọ mmiri.
Milan ka Dermulo Trento Ụgbọ oloko
Turin ka Dermulo Trento Ụgbọ oloko
Padua ka Dermulo Trento Ụgbọ oloko
Venice na Dermulo Trento Ụgbọ oloko
Njikere iji a ụgbọ okporo ígwè na Train Bridges ịhụ ndị a ebube nke ụmụ mmadụ? AKWỤKWỌ oche gị na adịghị akwụ ụgwọ ọ bụla ntinye akwụkwọ ụgwọ na www.saveatrain.com.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbreathtaking-train-bridges-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / tr aka / ru ma ọ bụ / fr na ndị ọzọ asụsụ.